Moments leh saaxiibo 34
Xuquuqda, 1910, by HW PERCIVAL.
Maxay yihiin faraqooyinka muhiimka u ah ee u dhexeeya Theosophy iyo fikir cusub?
Awoodda, hababka iyo xaqiiqda.
Kala duwanaantu maaha mid ku salaysan hadalka iyo ficilada lagu magacaabo makhaayiyeyaasha ama kuwa cusub, laakiin buugaagta diineed iyo kuwa fikirka cusub. Xubnaha intooda badani waxay diidaan qayaxan, waxayna u dhaqmaan si aan macquul ahayn inta badan dadka fikirka cusub. Koox kasta oo ka mid ah waxay muujinaysaa dhinaca dabeecadda aadanaha ee ka shaqeynaya waqti go'an. Caqiidooyinka Theosophy waa: karma, sharciga caddaaladda; reincarnation, horumarinta maskaxda iyo arimaha jidhka iyo jidhka kale iyada oo la adeegsanayo maskaxda ku soo noqoshada nolosha ilaa nolosha jidhka aadanaha adduunkan jir ahaaneed; Dastuurka 7aad ee dastuurka ah, mabaadii'da iyo isdhexgalka ay geli karaan qurxinta dadka; nasiib darrada ah ee dadka, in dhammaan ragga ay yihiin awoodo ilaahyo ah iyo in ay tahay awoodda qof kasta si loo gaaro gobolka ugu sarraysa oo kaamil ah oo si caqligal ah oo caqligal ah ula mid ah Ilaaha, Maskaxda Universal; walaaltinimada, in dhammaan ragga ay ka yimaadaan mid iyo ilaha rabbaaniga ah, iyo in dhammaan ragga ay la wadaagaan oo isku midka ah ayada oo ay ku kala duwan yihiin heerka horumarka, iyo in ruuxa oo dhan uu leeyahay waajibaad iyo midba midka kale xiriir la leh xubno qoys, iyo in ay waajib tahay xubin kasta oo ka mid ah in ay ka caawiso iyo caawiyaan kuwa kale sida ay awoodiisa iyo kartida.
Ujeeddadu waxay ku doodeen ama soo jeediyeen buugaagta muusikada iyo kuwa cusub waxay ku kala duwan yihiin. Ujeedooyinka sida loogu talagalay caqiidooyinka aosofiyada waa: Inay u hoggaansamaan shuruudaha Karma iyagoo fulinaya waajibaadka qofka, waa waajib, sababtoo ah waxaa ka dalbaday sharciga caddaaladda; ama sababtoo ah sidaas sameyn, mid karma karma wanaagsan; ama sababtoo ah waa mid sax ah-xaalad kasta oo la marsiin doono cabsi la'aan iyo rajo la'aan. Dhibaatada ama dhammays-tirnaan la'aanta waxaa loo eegayaa maadaama maaddadeedu ay ka baxsantahay masuuliyadeeda oo ay ku raaxeeyso midhihiisa, laakiin sababta oo ah iyada oo la gaari karo waa mid si fiican u caawin karta dadka kale marka ay ka baxayaan jaahilnimada, murugo iyo murugo isla markaana ay helaan isla hal hadaf. Ujeedooyinka isdaba joogga ah ee ficillada cusub ayaa ah marka ugu horeysa ee uu u fiicnaado, guud ahaan faa'iidooyinka jireed, iyo raaxada taas, ka dibna u sheegto kuwa kale in ay sidoo kale ku heli karaan rabitaankooda xariiqahan.
Hababka ay Tiyoshiisiintu kugula talinayso helitaanka shayadeeda waa iyada oo la sameeynayo waajibaadkeeda mid kasta oo meel kasta la dhigo, adeecid, niyad xumo wanaagga kuwa kale, adoo xakameynaya rabitaanka iyada oo la adeegsanayo caqliyada, adigoo noqda iftiin iyo adoo bixiya qadar macquul ah ee waqti go'an, lacag iyo ka shaqeeyaan faafinta caqiidooyinka. Tani waxaa la sameeyaa, iyada oo aan lacag lagu soo oogin ama lacag noocaas ah. Hababka Fikradda Cusub waa in ay ballan qaadaan faa'iidooyinka jirka iyo qancinta maskaxeed, lacagna waxaa laga qaadaa koorsooyinka tababarka fikradda iyo arjiga dhabta ah.
Farqiga kale waxa weeye in caqiidooyinka Theosophy ay yihiin kuwo qeexan, sida mabda'a iyo qoraalka; Hase yeeshee, qaddiyadaha cusub ee bulshada ee fikradaha cusub ee la soo jeediyey ayaa la sameeyey, iyo la'aanta hubaal la'aaneed ee shuruudaha iyo falsafada ayaa lagu muujiyay waxbarista. Barashada fikradaha cusubi waxay ku hadlaan wax yar, haddiiba, karma iyo reincarnation. Qaar ka mid ah qorayaashooda waxay ka hadlaan toddobada qodob ama qaar ka mid ah; waxay qabtaan ninkani runtii asalka iyo xaqiiqda, oo aaminsan yahay in nimanku yihiin walaalo. Hase yeeshee, waxaa jira caqli-galin la'aanta dhammaan hababka cusub ee aragtida cusub oo ah farqi calaamadeysan oo laga soo xigtay bayaannada tooska ah iyo kuwa adag ee laga sameeyay buugaagta qaaska ah.
Fikradaha kala soociddu waxay markaa yihiin: in ujeedadu ay tahay in la raaco raacitaanka Theosophy waa faafinta iyo adeegga ujeedada ah in lagu ogaado Ilaaha dhexdiisa, iyada oo ah ujeedada macquul ah ee macneheedu tahay in la isticmaalo macluumaadka sida uu u leeyahay shakhsi iyo faa'iido. Nidaamka shaqada ee qofka raacaya Theosophy waa inuu ku faafiyo caqiidooyinka aan mushahar lahayn; Hase yeeshee, khadka cusubi wuxuu sheegayaa in shaqaaluhu uu u qalmo shaqaalihiisii ​​oo uu ujiray lacag faa'iido, ama faa'iidooyinka la sheego, la siiyo. Qofka raacsan Theosophy wuxuu leeyahay shay qeexan iyo caqiidooyin isku dhafan, iyaga oo raacaya fekerka cusub ee cusubi maaha mid caqli-gal ah, laakiin wuxuu leeyahay rajo iyo farxad oo uu ku kalsoon yahay inuu helayo waxa uu doonayo. Kuwani waa kala duwanaansho sida waafaqsan caqiidada iyo buugaagta, laakiin waxa loo yaqaan 'sophobist' waa bani'aadamnimo iyo jahwareer iyo sidoo kale cusub; mid kasta wuxuu u dhaqmaa sida dabiiciga ah, inkastoo uu ku kalsoon yahay ama uu aaminsan yahay.
Halka uu Theosophy bilaabmayo dhammaadkii Fikradda cusub. Qoomiyaddu waxay ka bilaabantaa mid ka mid ah waajibaadka nolosha, iyo ujeedadeedu tahay in uu gaaro heer sare ah ee adduunka; iyo iyada oo loo marayo dhammaystirka, dhammaystirka adduunka ruuxiga ah. Fikirka cusub wuxuu ku bilaabmaa kalsooni iyo kalsooni ku kalsoonaanta ilaahnimadiisa, waxayna u muuqataa in ay ku dhammaato jir ahaan, maaliyad, barwaaqo iyo farxad-mararka qaarkood iyo waqtiga.
Waa maxay sababta kansarka? Ma jiraa wax daawo ah oo loo yaqaano ama ma jiri doono habab daaweyn ah ka hor inta aan la daaweynin daaweynta?
Waxaa jira arrimo degdeg ah iyo mid fog oo keena kansarka. Sababaha degdega ah ayaa ah kuwa ku foogan nolosha adduunka. Dhibaatooyinka fog waxay ka soo baxaan oo ka yimaadaan ficilka maskaxda ee dhalashada ka hor. Sababaha ugu dhow ee muuqaalka kansarku waa sida caleenta ama xannibaad joogto ah, taas oo keenta xannibo wareegga dhiigga, koritaanka unugyada iyo keena ciidda ku habboon horumarka, waxa la aaminsan yahay inay yihiin jeermiska kansarka ama waxaa laga yaabaa in ay sabab u tahay cuntooyin aan habooneyn oo jidhku awoodi waayey in uu la qabsado ama uu baaxaado iyo sababo la xiriira jeermiska kansarku ku dhaco, ama cudurku wuxuu sababi karaa xakamaynta, xakameynta iyo dilka, laakiin ku sii jirida jirka dheecaanka muhiimka ah inta lagu jiro falalka galmada . Dilka, xajinta iyo isu-ururinta jirka ee jiritaanka jeermiska nololeed ee muhiimka ah waa ciidda bacrin ah taas oo ku magacawday jeermiska kansarka jiritaanka; adoo sii wadaya ficilka jirka uu baaxad weyn u yahay koritaanka kansarka. Mar labaad xaalado isku mid ah ayaa laga yaabaa in la keeno awood la'aanta jidhka si ay u keento jeermiska muhiimka ah ee qaangaarka ah, ku fashilantay in uu sameeyo jeermiska noloshiisa oo uu dhinto oo uu ku sii jiro jidhka kaas oo aan awood u lahayn in uu la qabsado ama uu bareeyo.
Dhibaatooyinka fog waxaa maskaxda ku haya ficiladeeda ficilada hore ee muraayadaha hore ee maskaxdu ay ka qaadatay xad-dhaaf iyo cidhiidhin, laakiin taas oo dhalashadeeda aysan soo ururin hadhkii oo markaas ka dib la beeray, si la mid ah kuwa kuwa la qabatimay in lagu dhaqmo habdhaqan galmo oo khalad ah noloshan hadda ma heli karto, laakiin waa beeridda, sababaha soo goosta mustaqbalka-haddii aysan iyagu keenin sababo liddi ku ah fekerka iyo ficilka. Ilaa iyo inta aan kansarku la bedelin ama lagu beddelin, dhammaan kiisaska kansarku waxay sababaan sababo karmic ah; Taas macnaheedu waxa weeye, waxay sababaan ficilka iyo isdhexgalka ka dhexeeya maskaxda iyo rabitaanka beerta qofka jirkiisa. Ficilkan u dhexeeya maskaxda iyo rabitaanku waa in uu ka dhacey noloshiisa ama noloshiisa hore. Haddii ay ku dhacdo nolosha adduunka, waxaa loo aqoonsanayaa inay sabab u tahay kansarka degdega ah marka dareenka la tilmaamayo. Haddii midkood oo ka mid ah sababahaas ama sababaha la midka ah lagu dhejiyey noloshiisa, taas oo kansarku u muuqdo, markaa cudurku wuxuu sababaa sababo fog oo laga yaabo in la aqoonsado. Mid ayaa laga yaabaa inuu ka soo horjeedo sharciga muddo wakhti ah, oo kaliya, laakiin waa la hubiyaa wakhtiga. Unugyada kansarka iyo horumarkooda waa la burburin karaa, laakiin jeermiska kansarku maaha mid jidheed oo aan la burburin karin hab kasta oo jireed. Jeermiska kansarku waa astaamo waana qaabka uu unugyada u korayo oo u horumaro, inkastoo unugyada kansarku muujiyaan qaabka jeermiska kansarka. Unugyada kansarka iyo jeermiska waxaa lagu daaweyn karaa loona beddeli karaa hab jireed.
Waxaa jira daaweyn loogu talagalay daaweynta kansarka, waxaana la sameeyaa daaweyn. Curyaanku waxay sameeyeen daaweynta Salisbury. Daaweyntaan ayaa la ogaaday in ka badan afartan sano, laakiin dhakhaatiirta yar ayaa tijaabiyay. Daaweynta Salisbury ee cudurrada looma helin xirfad caafimaad. Qaar ka mid ah kuwa isku dayay inay si caddaalad ah u tijaabiyaan, waxay lahaayeen natiijooyin cajiib ah oo ku saabsan daaweynta badi cudurrada aan loo baahnayn. Saldhigga daaweynta Salisbury waa cunista hilibka lo'da leh ee khatarta leh oo ka soo baxa dhammaan cadka iyo faybarka iyo unugyada isku xiran, iyo cuna cunista waxaa weheliya cabitaanka biyo kulul oo aan ka yareyn saacad iyo badh kahor iyo kadib cuntada . Daaweyntani waa mid sahlan oo aan qaali ahayn ee dhakhaatiirta badankood. Si kastaba ha noqotee, daaweyntan, marka ay si macquul ah loo adeegsado, waxay ku dhufataa xididada, waxayna saameyn kartaa daaweynta cudur kasta oo la yaqaan. Hilibka hilibka ah ee la kariyey, oo laga helay unug iyo dufan ayaa laga saaray, iyo biyaha ayaa siiya walxaha ugu muhiimsan iyo kuwa ugu muhiimsan ee dayactirka jirka xoolaha caafimaadka leh. Cuntada hilibka lo'da iyo cabitaanka biyaha saafiga ah waxay saameysaa jidhka jirka iyo astaamaha cimilada, qaab jidhka ah. Hilibka cagaaran ma siin doono wax soo saarka koritaanka iyo horumarka jeermiska oo keeni kara jirro jidhka kaas oo hilibka caanaha laga qaado. Marka raashinka cuntada laga ciribtiro cudurka iyo cunnooyinkaas waxaa laga qaadaa jidhka sida aan loo isticmaali karin cudurkan, laakiin u wanaagsan yahay jirka, cudurku wuu dhimanayaa. Marka marka hilibka lo'da la qaato jirka, ma siinayo raashin waxtar u leh kansarka ama jeermiska cudurrada kale, iyo haddii cunto kale la joojiyo, koritaan la'aanta caafimaad ee jirku si tartiib ah u dhinto oo ay u baxdo geedi socodka gaajada. Tani waxay qaadan kartaa sanado waxaana jirku u muuqan karaa mid daal badan oo dareema tabar iyo jir ahaan daal. Xaaladdan waxaa sabab u ah hoos u dhigista qaybaha bukaanka ee jirran, laakiin haddii daaweyntu ay ku sii socoto jidhku waxay dib u heli doontaa caafimaadka. Maxaa dhacaya inta hawshu socoto waa in jirka jirka jirran jirkoodu si tartiib ah loo oggolaado in uu u dhinto oo la baabi'iyo, iyo meesheedba waxaa jira koritaan iyo horumarin tartiib tartiib ah, jidh jidh oo kale oo lagu dhajiyo hilibka lo'da. Cabitaanka biyaha la karkariyey oo la kulmay saacad iyo badh kahor iyo kadib cuntada waa muhiim sida cunidda hilibka, hilibka waa in aan la cunin si loo daaweeyo cudurka iyada oo aan la cabin biyo kulul iyo wakhtiyada lagu sheegay. Cabbitaanka cabbirka biyaha kulul wuxuu nuugi karaa asiidhka iyo xaalad xun oo ka soocaya jidhka, biyahaasna waxaa laga soo saari doonaa jirka. Hilibka waa cuntada jidhka; biyaha ayaa waraabiya oo nadiifiyaa jirka. Hilibka caatada ah wuxuu ka kooban yahay unugyo caafimaad qaba jirka, laakiin hilibku ma taaban karo ama si toos ah u saameyn kara jeermiska kansarka aan muuqan. Biyaha kulul waxay sidaan sameeyaan. Biyaha kuleylku waxay saameeyaan oo bedelaan jeermiska kansarka iyo jeermiska kale ee jidhka ku jira waxayna u habeeyaan kuwan baahida jidhka. Hilibku wuxuu dhisaa jirka jirka; Biyaha waxay u baahan yihiin baahida jidhka.
Jidhkani wuxuu ku salaysan yahay nadiif iyo caqli ahaanna waa qalab wanaagsan oo loogu talagalay maskaxda. Daaweeyntan oo kale maaha oo kaliya waa mid jidheed iyo jimicsi jireed oo isbeddelay oo sameeyey caafimaad, laakiin rabitaanada ayaa sidoo kale la saameeyaa, xannibay oo la tababaray. Kaliya daaweynta Salisbury ee cudurada waxay si toos ah ula xiriiraan jidhka jirka oo ah beerka unugyada kansarka iyo jirkoo ah cirridka kaas oo ah kursiga cudurka jeermiska. Daaweynta Salisbury sidoo kale maskaxdu sidoo kale waa la tababaray, si aan toos ahayn, sababtoo ah go'aamo ballaaran oo waa in maskaxda lagu hirgeliyo si loo qabto jidhka iyo rabitaankiisa si khaas ah daaweynta. Dad badan ayaa ku fashilmay daaweynta sababtoo ah ma ayan qabsan doonin sababtuna waa dareenka maskaxda iyo kacdoonimada oo inta badan ka muuqda kuwa isku dayaya iyo kuwa aan ka soo horjeedin. Haddii isbedelka la jebiyo oo aan niyadjabin bedelka bukaanka iyo maskaxda ku kalsoonaanta maskaxda, daaweyntu waxay noqon doontaa mid lama filaan ah. Iyadoo tababarka jirka la raacayo habab macquul ah, maskaxda ayaa is-tabobareysa qaliinka waxayna bartaa bareerka oo kaliya jirka oo keliya, laakiin sidoo kale waxa ka mid ah murugo iyo nasasho la'aan. Marka uu jiro xiriir udhexdhexaad ah oo u dhexeeya jidhka iyo jirrooyinka maskaxdu ma heli karaan guri aan ku jirin jirkaas. Jeermiska kansarka iyo unugyada kansarku ma sababi karaan cudur haddii uusan dastuurku awoodin inuu isticmaalo. Waxaa jira jeermis iyo kansar badan oo kansar ah oo ku dhow dhammaan jirka aadanaha. Xaqiiqdii jilicsanaanta jeermiska ayaa ku soo baxa jidhka bini'aadamka. Mid kasta oo ka mid ah cuduradani waxay keeni karaan jirro jeermis ah haddii xaalad jirku uusan ahayn sidii jeermiska loo ilaalin lahaa oo loo ilaalin lahaa jir wanaagsan. Jermiska cudurada weli aan la ogeyn jirka, laakiin jidhka iyo maskaxda ayaan weli bixin shuruudaha u oggolaanaya jeermisyadaas inay noqdaan caalam ahaan cuduro gaar ah. Waxaa laga yaabaa inay markhaati u yeeshaan caddayn markasta oo maskaxdu ay ka warqabto cudurka suurtagalka ah, xaaladaha cudurka dabiiciga ahna waxaa la siiyaa cunto iyo cunno aan habboonayn.
Jeermiska kansarka iyo unugyada ayaa iska leh wakhtiga taariikhda iyo horumarinta jinsiga aadanaha marka jidhka bini-aadamku uu yahay mid jinsi ah. Wakhtigaasi ma aysan suura galin in cudurku hadda la yiraahdo kansar sababtoo ah taasi waxay ahayd unug caadi ah oo loo isticmaalo dhismaha jirka. Jinsiyadeena xaadirka ah ayaa gaadhay heer dhibic ah oo kobcinaysa taariiqda taasoo u keentay diyaarad isku mid ah oo ah tartanka ku soo booday jimicsigiisii, taas oo ah, diyaaradda oo ku dhacday kacsanaanta ama horumarinta jidhka lab iyo dhedig ee lab ah jinsiga lab iyo dheddigba iyo jimicsiga aan hadda og nahay.
Jidhka jirka ayaa la dhisaa oo la dayactiraa si joogto ah iyo burburinta jeermiska. Waa dagaal of jeermiska. Jidhku waxa uu ku dhisan yahay qaab dawladeed. Haddii ay ilaaliso qaabkeeda dawladeed waxay haysaa amar iyo caafimaad. Haddii amar aan la keydinin, kooxaha iska soo horjeeda ayaa galaya xukuumadda waxayna keenaan khalkhalka, haddii aysan dhalin kicin ama dhimasho. Jidhku ma ahaan karo mid aan firfircooneyn ama mid aan waxba galabsan. Goobaha jeermisyada ee dhisto jirka iyo garabyada kale ee jeermiska ka difaacaya weerarada iyo soo duulida jeermiska ka soo horjeeda waa inay awoodaan inay qabtaan ayna la qabsadaan kuwa soo weerara. Tani waxaa la sameeyaa marka jidhku cuno cunto caafimaad leh, cabitaan biyo ah, nadiif ah hawo nadiif ah, ninku wuxuu jecelyahay fikradaha caafimaad wuxuuna isku deyayaa in uu ka fekero saameynta iyo ficilada sida ujeedada saxda ah.